Ny rehetra momba ny bilaogy iPhone News | Vaovao IPhone
Actualidad iPhone dia bilaogy amin'ny teny espaniola izay hahitanao ny fampahalalana tsara indrindra mifandraika amin'ny iPhone sy ny rindranasa na ny lalao izay azonao sintonina avy amin'ny App Store, ny fivarotana fampiharana. Hamoaka isan'andro izahay vaovao momba ny telefaona paoma, fampianarana tokony hatao jailbreak, sokafy ny iPhone na araraoty tsara ny iOS. Izahay koa mitondra anao famakafakana sy famerenana Fitaovana iPhone Ao no ahitanao tranga, jiro, mpandahateny, dock ary maro hafa ho an'ny iPhone.
ny Luis Padilla hace 1 andro .
Rehefa afaka andro vitsivitsy niaraka tamin'ny AirTags dia niresaka momba azy ireo ny zavatra niainantsika. Miresaka vaovao hafa ihany koa izahay amin'ity herinandro ity toy ny ...
Podcast 12 × 28: Fanavaozana sy vaovao hafa
ny Luis Padilla hace 1 herinandro .
iOS 14.5 dia eto, miaraka amin'ny sisa amin'ireo fanavaozana, ary manadihady ny vaovaony izahay ary koa zavatra maro hafa izay ...
ny Luis Padilla hace Herinandro 2 .
Taorian'ny hetsika Spring Loaded dia jerentsika izay rehetra navoakan'i Apple androany. Ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny ...
Podcast 12 × 26: Izay rehetra fantatsika momba ny hetsika manaraka amin'ny 20
ny Luis Padilla hace Herinandro 3 .
Manana daty ofisialy amin'ny hetsika lohataona an'i Apple ihany isika amin'ny farany: ny 20 aprily ho avy izao ao ...
ny Luis Padilla hace Herinandro 4 .
Podcast 12 × 24: WWDC 2021 dia efa manana daty
ny Luis Padilla hace 1 volana .
Apple dia nanambara ny daty hanatanterahana ny kaonferansa ho an'ny mpamorona, WWDC 2021, ao amin'ny ...
Podcast 12 × 23: veloma ny HomePod, inona no miandry antsika?
Podcast 12 × 22: Miankina amin'ny iPad izany
Apple dia mandefa Podcast vaovao ho an'ny ankizy kely ao amin'ny fianakaviana
ny Toni Cortés hace 2 volana .
Apple te hitrandraka ny zotra podcast. Toa hitany izao fa io fomba fanaovana "radio" ...
Fitsapana maimaim-poana azo henoina mandritra ny 3 volana i Amazon
ny Ignacio Sala hace 2 volana .
Audiobooks no fomba tsara indrindra, farafaharatsiny faran'izay ahazoana aina indrindra, hahafahana mankafy ireo boky rehetra ananantsika hatrizay ...
Podcast 12 × 20: Hetsika volana martsa ... Na tsia
Toy ny fanao tato anatin'ny volana vitsivitsy, mipetraka ny fanontaniana raha hanao hetsika i Apple amin'ity volana martsa ity ...
Ahoana no hahalalana hoe avy aiza ny orinasa iPhone
Tapaka ve ny iPhone raha mbola manana herin'ny bateria? Eto ny vahaolana
Ahoana ny fanamboarana ny olan'ny fifandraisana Bluetooth ao amin'ny iOS 10
Wiseplay, fantsona eran-tany amin'ny findainao [TUTORIAL]
Sambatra Chick, ilay emulator All-in-One ho an'ny iOS sy Android izay ho tianao. [Tutorial momba ny fametrahana]
Ahoana ny fomba hanaovana ny flash flink amin'ny iPhone rehefa miantso ahy izy ireo
Ahoana ny fanamboarana ny tsy hita na ny tsy fampandrenesana ny fifandraisana amin'ny iCloud ao amin'ny iOS 7.1.2
Tutorial: Ahoana ny fanesorana ny geolocation ny sarinay amin'ny iPhone
Tutorial: Ahoana ny fomba famindrana ireo memo anao amin'ny iPhone amin'ny solosaina
Tutorial: Ahoana no ahafantaranao raha misy mahita anao amin'ny 'Tadiavo ny namako'